~ ဏီလင်းညို ~: နိယာမနဲ့ ဒဏ်ရာ
ကျိတ်ဆွေးရမယ့် ဒဏ်ရာ.......။ ။
(မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ...။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိက ခွင့်လွှတ်ပါ....။)
(စာကြွင်း......။ ။ မနေ့က အွန်လိုင်းမတက်ဖြစ်တာကြာနေလို့ ခဏတက်လိုက်တုန်း တွေ့လိုက်မိတဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးဖော်ညီလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားနည်းနည်းပြောဖြစ်လိုက်ပါ တယ်....။ အဲ့ဒီညီလေးနဲ့ စကားပြောရင်း ဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်းအကြောင်းကို စကားစပ်မိသွားခဲ့ မိပါတယ်....။ နည်းနည်းပါးပါးပါပဲ....။ အဲ့ဒီက အတွေးစလေးတချို့က ညပိုင်းအလုပ်သွား ဆင်းရတဲ့အထိ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာငြိနေရတာမို့ ညကြီးမင်းကြီးအလုပ်ထဲမှာ ဒီကဗျာလေး ကိုရေးလိုက်မိပါတယ်.....။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ အလုပ်သမားနော်ဗျ......း))
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 6:52 PM
Labels: ဘလော့ဂ်လောက အတွေ့အကြုံ, ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာ
အင်း တရားရစရာနိယာမဆိုတာထက်ဗျာ သစ္စာတရားမရှိရတော့ဘူးလားကိုဏီရေ
အဲဒါပဲ။ လူပျိုကြီးတွေ ခံနေရတဲ့ဒုက္ခ။ ဟိုလူ့မျှော်ရ၊ ဒီလူ့မျှော်ရနဲ့။ သြော်..သနားလိုက်ပါဘိတောင်း။ ဟိုအပေါ်က လူပျိုကြီးကလည်း ပြောတော့ သံသရာကလွတ်ချင်တယ်လေးဘာလေး။ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့နောက်ခံက နိဗ္ဗာန်ထင်ပါရဲ့.။
ကိုဏီးရဲ့ ကဗျာလေးကလည်း ဘယ်သူ့ကို စောင်းရေးထားလဲ မသိဘူးနော်။း)
အဲဒီလို မလုပ်ပါနဲ့ အလုပ်မအားလည်း အားတဲ့ အချိန်လေးသွားပေ့ါ။ သူမလာလည်း ကိုကသာ ရောက်အောင်သွား။ မြှောက်ပေးသွားတယ်။း))
ဟားဟား ဘယ်သူမှမသိကြဘူး ... ကျွန်တော်ပဲ သိတယ် ...
တို့ အစ်ကို တော်လေစွ .. တော်လေစွ ...
ကိုကြီးကျောက်...၊ ကိုမောင်.....၊ ကိုမိုး......၊ မနောဖြူ.....၊ ဒဏ္ဍာရီ.... မှားမယ်နော်..ဘာမရှိဘူး.....ကိုဏီးမှာ.....။ အသွားအပြန်ဆန်တဲ့ သဘောလေးကိုရေးထားတာ......။ နောက်ဖတ်တဲ့သူတွေ နားလည်မှုလွဲကုန်မှာစိုးလို့........း))
ကိုတူးကတော့ သိတယ်...... နတ်သာမီး....ကော်မန့်လာပြန်ဖတ်.......း))
မသိဖူးဗျာ ကိုမိုးပြောတာပဲ မျက်စိမှိတ်ယုံမယ်ဒါပဲ
လူပျိုကြီးကိုဏီး ဟိဟိ ကျိတ်ဆွေးနေတာ သေချာတယ်ဗျို့ (ဖွသွားတာ)း)
လက်စသတ်တော့ မအားဖြစ်နေတာကိုး.. :-)
(ကြော်ငြာ ဝင်လိုက်တား) )
နှတ်မဆက်တဲ့သူက အိမ်ထောင်ရှိလို့။း)))
ဒါ...ဒါ...နာ့ဂို တည့်တည့် ပြောနေဒါ....:)
မြသွေးနီ လက်ရှိဖြစ်နေတာနဲ့ ကွက်တိ။ ဟွန်း...။
ဏီဏီရေ မျှော်စာလေးလာဖတ်တယ်း))
မမှားပါဘူး။ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ရေးပြီးမှ ဒီလိုလုပ်လို့ ဘယ်ရမလဲ။ မှန်မှန်ပြော......
ဘလော့လောကကတွင် မဟုတ်ဘူး နေရာတိုင်းမှာ ဒီလိုပါပဲ၊ အမက ဘလော့ရေးတာ ၄ နှစ်နီးပါး ရှိပြီဆိုတော့ ဒဏ်ရာတွေများလွန်းလို့ ထုံနေပြီ။ မဖြုံတော့ဘူး။ ဏီလင်းလဲ ကြာရင် ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။
ဒဏ်ရာ ဆိုပြီး အမှန်ညာ ပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ မာမီညိုရယ်...
မာမီညို ဆိုပြီး အထာတွေခို မနေနဲ့ .. . . .
သူမလာပေမဲ့ ကိုယ်က သွားလိုက်ပေါ့. . .
အဖြစ်အဖြစ် မနှစ်ကနဲ့မတူတော့ပါလား.... ညှစ်မှ ထွက်ရတဲ့... လေပုတ်ထုတ်ဆေးရယ်... အဲလေ. ခမ်းချဉ်သီးရယ်... ဂွီ........
ရင်မှာ တပုံကြီး ချစ်ခဲ့ဘူးပါသီ.....
မင်းကလွဲလို့...... အားလုံး တကယ်လန်းသီ.....
(ငါ့ကိုပေါတယ်လို့ ပေါ်တင်ပြောရင် ဆရာလို့ ၃ခါခေါ်တာနဲ့... တူတူဗြဲ...
တိတ်တိတ်လေးစိတ်ထဲကပြောရင်... ဆရာခြောက်ခါခေါ်တာ...ညှင်း... ညှင်း..)
နောက်ဆို သူအမြဲလာအောင် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးလေ.... တနေ့ ၃ခါ အမြဲလာလိမ့်မည်... ဟိဟိ
ဒါလည်းဘလောဂ်သဘာဝ တစ်ခုလို့သာ မှတ်လိုက်ပါ အညိုရာ
ဒီလိုတွေက ဘလောဂ်ခေတ်အဆက်ဆက် ရှိနေအုံးမှာပါ
စိတ်ပျော်အောင်သာနေ အကိတ်တွေ အဝုန်းတွေ လွှတ်လိုက်မယ်။
အသွားတွေအပြန်တွေ ရှုပ်နေတာပဲနော် ...
ကိုယ်ကြိုက်ရင်တော့ သူလာလာမလာလာ ဘယ်သူလာလာမလာလာ သွားတယ် လာတယ် ရေးတယ် .. ။ မျှော်ရတာ ပင်ပန်းပါတယ် ကိုလင်းညိုရယ် ... မမျှော်နေနဲ့နော် ။ ကိုမြစ်ကျိုးအင်း ပြောသလို စိတ်ပျော်အောင်သာနေ ..း))
ဘလော့ဂ်လောကမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝကို အားလုံးကိုယ်စားခံစားရေးထားမိတာ.......။
ဟုတ်တယ် ကိုတူးပြောသလိုပဲ ဏီဏီ့မြှုပ်ကွက်ကို ဖတ်ရင်းမြင်နေရတယ်နော်..။
အော်... ဂလိုလားးးး မာမီညို... ရေးရေးလေး ပေါက်လာပြီ.. အဲလေ... မှားလို့..
သတိရလို့ အပြေးလာတာ အကိုအကြီးကြီးရေ....
ရွှေစင်ဦး လေးကိုတော့ စောင်းမရေးကောင်းပါဘူးနော်
လင့်ခ် လုပ်ထားတာ မရှိတော့ တချို့အိမ်တွေကျန်သွားပါတယ်
ဟုတ် ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး ကိုဏီးရာ..
မွန့် ဘလော့က ဝင်လို့မရတာ ကြာပြီ။
စာရေးပြီး စာတွေတင်လဲ မရတော့ပါ။
မွန့် ဘလော့ ကြောင့် သိပ်စိတ်ညစ်တယ်။
ဘလော့အသစ်ကလေးတစ်ခု ထပ်လုပ်နေတယ် ။
ကိုဏီး ကဗျာက..အင်း ပြောတော့ပါဘူး။
ကဗျာလေး ကောင်းတယ် ကိုဏီးရေ..။
လာမလည်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ဘလော့ သူငယ်ချင်းများ ဆီနေ့တိုင်းရောက်ပါတယ်။